Dibadbaxyo looga soo horjeedo dadka soo-galootiga oo dka dhacay Koonfur Afrika 4 – idalenews.com
Dibadbaxyo looga soo horjeedo dadka soo-galootiga oo dka dhacay Koonfur Afrika 4
Pretoria(INO)- Booliska dalka Koonfur Afrika ayaa adeegsaday xabado caag ah, gaas iyo biyo si ay u kala ceyriyaan dhallinyaro diidan soo galootiga oo isugu soo baxay magaalada Pretoria.
Diyaarad boolis oo joog-hoose ku duuleya ayaa sidoo kale gaas ku furay dibadbaxayaasha. Labada koox ee isu soo baxay oo oo kala ahaa ajaaniibta iyo muwaadiniinta Koonfur Afrika waxay wateen budad, dhagxaan iyo baangado.
Madaxweynaha dalkaasi Jacob Zuma wuxuu labada dhinac ugu baaqay inay xaaladda dejiyaan. Dad badan oo shaqo la’aan ah oo u dhashay South Afrika waxay ajaaniibta ku eedeynayaan in shaqadii oo dhan ay qaateen.
Wuxuu sheegay in illaa iyo hadda la xiray 60 qof oo ka shaqeynayay shirkad lagu magacaabo Spar oo “sharci la’aan aha Mr Gigaba wuxuu ugu digay shirkadaha in la ganaaxi doono haddii ay sharciga ku xadgudbaan.
Wuxuu shidoo kale u sheegay shirkadaha in aysan isku dirin ajaaniibta iyo muwaadiniinta shaqo la’aanta ah. Wuxuu intaa raaciyay in 33,339 qof laga musaafuriyay Koonfur Afrika sanadahii 2015-2016-kii”.
DEG DEG: Warbaahinta qaarkeed oo laga mamnuucay shirarka aqalka cad
Maxkamadda ICJ oo Kenya u qabatay in dhamaadka sanadkan soo gudbiso jawaabta dacwada Badda